सन्तुलित आहार कसरी बनाउने ?
घिउ, तेल तथा अन्य चिल्लोको मात्रा जतिसक्यो कम प्रयोग गर्ने । खाना पकाउनका लागि घिउको सट्टा शुद्ध तोरीको तेल नै प्रयोग गर्ने । नुन दैनिक तीनदेखि पाँच ग्रामभन्दा बढी प्रयोग गर्नुहुँदैन । नुन थपेर खाने बानी छोड्नु राम्रो हुन्छ । बिहान–बेलुकाको खानामा हरियो साग हुनु अत्यन्त लाभदायी हुन्छ । दैनिक कम्तीमा एकपल्ट फलफूल खानुपर्छ ।
Cancer Rog – Lakshan, Kaaran Ra Bachne Upaaya
बेलुकाको खानामा दुई–तीनवटा सुक्खा गहुँको रोटी, साग र मौसमी तरकारी भएको राम्रो । बेलुकाको खाना आठ बजेभित्र खाइसक्नुपर्छ । बिहानको एक छाक मात्र भात खाने गर्नु राम्रो । तर, खानको मात्रा सबैका लागि एकनास भने हुँदैन । धेरै शारीरिक काम गर्नेले धेरै खानुपर्छ, थोरै काम गर्नेले थोरै खानुपर्छ । काम कम, माम धेरै गर्नुहुँदैन । बेलुकाको खाना खाएपछि तुरुन्त सुत्नुहुँदैन । कम्तीमा एक–दुई घन्टापछि मात्र सुत्नुपर्छ ।
शाकाहारी भोजन मुटुरोगका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तर, नियन्त्रित रूपमा माछामासु खाएमा हानि हुँदैन । खसी, राँगो र बंगुरको मासुले कोलेस्ट्रोल बढाउँछ । माछा र कुखुराको मासुले कम बढाउँछ । चिल्लो नराखी माछा र कुखुराको मासु खाँदा हानि गर्दैन । माछामासु बिहान र दिउँसोको खानामा मात्र प्रयोग गर्नु राम्रो । बेलुका माछामासु नखानु नै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ ।
उच्च फाइबरयुक्त खानाले मुटुलाई फाइदा गर्छ । खानामा फाइबरको प्रमुख स्रोत गहुँ, गेडागुडी, हरियो सागपात नै हुन् । अंकुरित गेडागुडी खानु अझ बढी लाभदायक हुन्छ । फापर, कोदो, जौ, मकै आदिले पनि मुटुलाई फाइदा पुर्याउँछ । गाउँघरमा धेरै प्रयोगमा आउने गुन्द्रुक, आँटा, फापरको रोटी, कोदाको रोटी, कुरिलोको सुप, कोइरालाको अचार, केराको बुंगाको अचार, निउरीको तरकारी, लौकाको तरकारी, तितेकरेलाको अचार, भुटेको मकै, भटमास, चनाकेराउ, दाँतेओखर आदि मुटुका लागि अत्यन्त लाभदायी मानिन्छन् ।
स्वस्थ मुटुका लागि खाना थोरै–थोरै तर धेरैपल्ट खानु उचित हुन्छ । दुई छाक खाने तर पेट कसेर खाने, अनि खानेबित्तिकै सुत्ने । यो मुटुका लागि अत्यन्तै खतरनाक बानी हो । खानामा कोलेस्ट्रोल मात्रा जति कम भयो, मुटुलाई त्यति हानि कम हुन्छ ।बेलुकाको खानामा दैनिक एक पोटी काँचो लसुन खाँदा फाइदा हुन्छ । यसले रगतको कोलेस्ट्रोल घटाउँछ साथै एस्पिरिनले जस्तै रगतलाई पातलो पनि पार्छ ।
Source:- Purbeli News
Next Article के हो क्यान्सर ? यसका लक्षण – कारण र बच्ने उपायहरु के के हुन् ?
ग्राण्डीमा प्रधानमन्त्रीको डायलासिस, भोलि दोस्रोपटक गरिने सम्भावना
Copyright © 2020 nirajan.info.np.